ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက် - Irmak Zonguldak လိုင်းရှိမီးရထားလမ်းကူးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း Km: 166 + 900 - RayHaber
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဝန်ဆောင်မှုAlınacaktırပျော်စေ
တင်ဒါကြေငြာချက် - ငလျင်အန္တရာယ်တွက်ချက်မှုများနှင့် Erzincan ဘူတာရှိအိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှုအတွက်အတည်ပြုအစီရင်ခံစာများကိုပြင်ဆင်ခြင်း »
မြစ် Zonguldak လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: အလုပ်ခြင်းအတွက် 166 900 + ရထားလမ်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းတံတား
STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)2တူရကီအထွေထွေဒါရိုက်တာသမ္မတနိုင်ငံ။ ဝယ်ယူစီမံခန့်ခွဲရေး SERVICE ကိုတစ်ဝိုက်
မြစ် - Zonguldak လိုင်း KM: 166 900 + လှုပ်ရှားမှုအတွက် DE ရထားလမ်း ALT လေယာဉ်ပြေးလမ်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 455487
က) လိပ်စာ: Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီကနေတဆင့် Anadolu Boulevard
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3122111449 - 3122111225
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumx.bolgesatinalma@tcdd.gov.t
55,14 မီလီမီတာ O ထူးအိမ်သင် Ribbed (ရေကြောင်းအပါအဝင်) သံမဏိထောက်ပံ့ရေးနှင့်အလုပ်သမားရေးရာနှင့်အခြားအလုပ်လုပ် - အားဖြည့်ကွန်ကရစ် O 8 12 ၏တန်ချိန်
ခ) Place: မြစ် - Zonguldak LINE KM: 166 900 + DE (ÇANKIRI)
က) အဆိုပါနေရာအရပ်: ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရုံးကြမ်းပြင်၏ TCDD ညွှန်ကြားမှုxnumx.bölg receiver နှင့် Inventory Control ကိုညွှန်ကြားမှု Buy: အမှတ် 2
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 15.10.2019 - 10: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လုပ်ထားတဲ့Karabük-Zonguldak stormwater နှင့်ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများအကြားတန်းဖြတ်မှာ Irmak-Zonguldak လိုင်း 21 / 07 / 2017 Irmak-Karabük-Zonguldak လိုင်း Zonguldak နှင့် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)2၏ TC အထွေထွေဒါရိုက်တာလုပ် stormwater ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများအကြားတန်းဖြတ်မှာ။ stormwater နှင့်ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများအတွက်တွေ့သည်အဆင့် Crossing အကြားဒေသဆိုင်ရာဝယ်ယူမှုများနှင့် Inventory ထိန်းချုပ်ရေးညွန်ကြား Irmak-Zonguldak လိုင်းKarabük-Zonguldak အမှုကိုပြုခံရဖို့ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခကနေတဆင့် Anadolu Boulevard) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်:: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 360951 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ 3122111449 - 3122111225 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: က c) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Irmak-Zonguldak Zonguldak လိုင်းဘူတာဂိုဒေါင်ကားသင်တန်းအမှတ်စဥ်လုပ်ငန်းခွင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပြုလုပ်ခြင်းအပေါ် 20 / 06 / 2018 အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းဝယ်ယူရေးအသိပေးစာ STATE ရထားလမ်းသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD)2။ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြုသောအမှုစီမံခန့်ခွဲရေး SERVICE ကိုတစ်ဝိုက် Irmak-Zonguldak Zonguldak လိုင်းဘူတာဂိုဒေါင်အော်တို Exposure အမျိုးအစား Sahana purchasing ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 297526 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Anadolu Boulevard Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခမှတဆင့်) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3122111449 - 3122111225 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumx.bolgesatinalma@tcdd.gov.t ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်း အင်တာနက်လိပ်စာများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: တစ်၏နူးညံ့မှ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ်) ...
ပါဝါလိုင်းမီးရထား Displacement လုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အတူ Irmak-Zonguldak ရထားလမ်းတံတား 26 / 06 / 2018 2018 + 275607 ပါဝါရထားတံတား: Zonguldak လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး - Irmak - တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TCDD) 4.098.079,37 / 6.144.741,65 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 322 TL နှင့် Irmak နှင့်အတူ 630 TL အကြောင်းကိုကုန်ကျစရိတ်၏လုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်းရထားလမ်း Displacement နှင့်အတူ Zonguldak လိုင်း Hydraulic ရထားလမ်းတံတား မိုင်အကွာအဝေးနှင့်အတူ: + 322 560 - မီးရထား Displacement အကြားတွင် 323 630 + တစ်ခုတည်း၏လုပ်ငန်းခွင်ဆောက်လုပ်ရေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့် DEV မီးရထားလမ်းတည်ဆောက်ရေးတူးဖော်ကုမ္ပဏီရရှိထားပြီးပါပြီပေးသောလေလံလေလံနှုန်းနူးညံ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုက 20 4.099.280,01 ဖြစ်ခဲ့သည်။ နုလေလံပါဝင်2ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနူးညံ့ 29.436,28 mxnumx တူးဖော်အမျိုးအစားနှင့်တူးဖော်တွေ့ရှိသောမြေဆီလွှာ (Split သုံးပြီး ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မြစ် - ဟိုက်ဒရောလစ်တံတားစီမံကိန်းကိုပြင်ဆင်မှုအလုပ်နှင့်အတူ Zonguldak လိုင်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းအား 20 / 07 / 2015 Irmak - STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)2၏ဟိုက်ဒရောလစ်တံတားစီမံကိန်းကိုပြင်ဆင်မှုအလုပ် TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူ Zonguldak လိုင်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းအား။ တစ်ဝိုက်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရေးမြစ် - Zonguldak လိုင်း KM: 296 + 400 ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းနှင့် KM: ဧည့်ခံ 322 အမှတ်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 630 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ဝန်ဆောင်မှု 4734 + 19 '' ဟိုက်ဒရောလစ်တံတားဒီဇိုင်းအဘိတ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 84905 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Anadolu Boulevard Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခမှတဆင့်) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3122111449 - 3122111225 ဂ) e-mail လိပ်စာ ...
အဆိုပါ 367 079 + ကီလိုမီတာမြစ်Çaycuma Zonguldak လိုင်းကတ္တရာသုံးမြေပေါ်တံတားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်များအတွက် 07 / 05 / 2019 367 £မြစ် Zonguldak လိုင်းကီလိုမီတာ 079 +2အကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့တူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD 2019, ဒေသဆိုင်ရာပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု (TCDD) 146795 / 2.472.814,19 JCC နံပါတ်, '' ၏Çaycumaမြေပေါ်တံတားကတ္တရာသုံးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်အတွက်မြစ် Zonguldak လိုင်းကီလိုမီတာ 367 + 079 Çaycumaအတွက် 2.307.012,00 နှုန်းမြေပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်သွယ်ရေးလီမိတက်ကုမ္ပဏီချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ချုပ်ဝင်ရေနံတွင် Sands သတ္တုတွင်းပြုသောအမှုတင်ဒါလေလံကတ္တရာအလုပ်ကိုပေးတော်မူ၏။ နူးညံ့သော, Zonguldak မြစ်လိုင်းကီလိုမီတာ 367 079 + ကိုလည်းÇaycuma asphalting overpasses ပါဝင်သည်။ ယောဘသည်နေ့စွဲပြီးစီးနေ့စွဲ 08.04.2019 30.09.2019 ကိုစတင်ပါ။
ရထားလမ်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းတံတား Making, TCDD2။ ဒေသန္တရရုံး
TCDD တူရကီ2။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
Anadolu Boulevard Behicbey / တူရကီ
Behicbey / တူရကီ, တူရကီ Türkiye + Google Maps ကို
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လုပ်ထားတဲ့Karabük-Zonguldak stormwater နှင့်ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများအကြားတန်းဖြတ်မှာ Irmak-Zonguldak လိုင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Irmak-Zonguldak Zonguldak လိုင်းဘူတာဂိုဒေါင်ကားသင်တန်းအမှတ်စဥ်လုပ်ငန်းခွင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပြုလုပ်ခြင်းအပေါ်
ပါဝါလိုင်းမီးရထား Displacement လုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အတူ Irmak-Zonguldak ရထားလမ်းတံတား
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မြစ် - ဟိုက်ဒရောလစ်တံတားစီမံကိန်းကိုပြင်ဆင်မှုအလုပ်နှင့်အတူ Zonguldak လိုင်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းအား
အဆိုပါ 367 079 + ကီလိုမီတာမြစ်Çaycuma Zonguldak လိုင်းကတ္တရာသုံးမြေပေါ်တံတားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်များအတွက်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မြစ် Zonguldak လိုင်းÇerkeş KM: + 205 083 သာနေသောလူသွားလမ်းမြေပေါ်အတွက်တန်းလုပ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Çankırıအကြားတွင် Irmak-Karabük-Zonguldak လိုင်းဟာ Stormwater သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Channel ကိုအဆင့် Crossing လုပ်ခြင်းကိုတွေ့
Irmak - Zonguldak ပါဝါလိုင်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းတံတားစီမံကိန်းနှင့်တင်ဒါလေလံ၏ Project မှအဘိတ်စုဆောင်းခဲ့ကြ
Irmak - Zonguldak နှင့်ပါဝါလိုင်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းတံတားစီမံကိန်းပရောဂျက်တင်ဒါရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်